China Sheet Metal orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | firaka
Fombanay vy metaly serivisy dia manolotra vahaolana mahomby sy an-fangatahana ho an'ny filanao fanodinana. Manana haingam-pandeha haingam-pandeha isika, ny toetoetran'ny fitaovana fanamboarana vy izay mifanaraka indrindra amin'ny famokarana ampahany vy maharitra sy farany amin'ny alàlan'ny famokarana miverimberina sy ambany ary avo ary mifangaro avo izay noforonina tamin'ny famaritana anao.
Asa vy dia ny fizotry ny fametahana vy izay mamorona vokatra vaovao avy amin'ny karazana vy isan-karazany. Ny fizotran'ny fanafanana dia ampiasaina hanamafisana na hanalefaka ny vy amin'ny alàlan'ny fanamainana na fanamafisana azy mandra-pahatongany amin'ny haavon'ny hamafin'ny tadiavina, ary toy izany koa amin'ny endrika azo iasana. Teknika manan-danja marobe no azo ampiasaina amin'ny fizotran'ny fitsaboana hafanana, ao anatin'izany ny fampidirana an-tany, ny famonoana azy, ny fanamafisana orana ary ny fanamainana
Ahoana ny fomba fiasan'ny lamba vita amin'ny metaly
Misy dingana iraisana 3 amin'ny fizotry ny fanamboarana vy, izay rehetra azo tanterahina amin'ny karazana fitaovana fanamboarana.
● Fanesorana fitaovana: Mandritra an'io dingana io, ny singa matevina dia tapaka amin'ny endrika tadiavina. Betsaka ny karazana fitaovana sy ny fizotran'ny milina izay afaka manala vy amin'ny workpiece.
● Fanovana ara-pitaovana (fananganana): Ny tapa-by vita amin'ny vy dia niondrika na niforona endrika 3D nefa tsy nanala fitaovana. Misy karazany maro ny fizotrany afaka mamolavola ny workpiece.
● Assembling: Ny vokatra vita dia azo angonina avy amina sombin-javatra vita.
● Fampiasana maro no manolotra serivisy famaranana koa. Matetika ilaina ny famaranana alohan'ny vonona ny vokatra vita amin'ny metaly ho an'ny tsena.
Fampiharana ho an'ny Metal Sheet
Enclosures - Ny metaly takelaka dia manolotra fomba mahomby amin'ny famolavolana ireo takelaka fitaovana, boaty ary tranga amin'ny rindrambaiko isan-karazany. Manamboatra fonosana amin'ny endriny rehetra izahay, ao anatin'izany ny tranokala, ny endrika "U" ary ny "L", ary koa ny console sy consolet.
Chassis - Ny chassis noforoninay dia matetika ampiasaina hifehezana ny fifehezana electromekanika, manomboka amin'ny fitaovana kely tanana ka hatramin'ny fitaovam-pitsapana indostrialy lehibe. Ny chassis rehetra dia natsangana tamin'ny refy kritika mba hiantohana ny firafitry ny lavaka eo amin'ny faritra samihafa.
Fehin-tànana - manamboatra fonosana mahazatra sy singa metaly isan-karazany, mifanaraka tsara na amin'ny fampiharana maivana na rehefa ilaina ny fanoherana harafesina avo lenta. Ny fitaovana sy ny fastener rehetra ilaina dia azo aorina tanteraka ao.
Fanapahana laser, fanapahana plasma, fanapahana rano, famonoana cnc, famoronan-doha, fanamafisam-peo, fanangonana sns
VIRATY, Steel, Inôksa, varahina, varahina
Anodized, sandblasted, polished, vovoka mifono, electroplated, sns
Fanaraha-maso ny sombin-tsakafo voalohany, Famaranana
Fambolena, kamio, fiara, elektronika, fitsaboana, fanaka, fitaovana, milina sns
Machining CNC, Mihodina ny CNC, Fametahana metaly, Sheet Metal, Vita, sns
Teo aloha: Fametahana metaly
Manaraka: Fizarana Titanium